I-Internet Ministries - Izalathisi
Uludwe lwethu lwemibhalo luyilwe kuphela kwiicawa zikaKristu kwaye akukho mnye. Asiyi kubhala iicawa ezisebenzisa izixhobo zomculo kwiinkonzo zazo zonqulo, kwaye ukuba icawa yakho isebenzisa igama elifani nceda ungabhala apha.
Ngaphambi kokuba uluhlu lweenkcukacha zakho zecawa okanye wenze nayiphi na imbuyekezo uza kuqala ufune ukubhalisela "i-Akhawunti yokungena". Oku kuya kukuvumela ukuba ufikelele ekufakeni ulwazi lwebandla lakho kwiinkcukacha zethu rhoqo ngokufunekayo. Intlawulo yenkonzo yonyaka ye-$ 29 (USD) iyadingeka. Emva kokufumana inkokhelo uya kuba nakho ukungenisa idatha yakho kwi "World Directory Directory of Churches of Christ" kunye ne "Churches of Christ Online Directory" (iicawa ngewebhu) ngaphandle kweendleko ezongezelelweyo kulo nyaka.
Unokuhlawula "i-Akhawunti yakho yokungena" ngekhadi lokubambisa okanye kwikhadi lekhredithi. I-Internet Ministries isebenzisa iseva yentlawulo ekhuselekile ngePayPal.com.
Inkokhelo yakho iya kusinceda siqhubeke le nkonzo ebalulekileyo kwiicawa zikaKristu ngehlabathi.
Ngamana uThixo akusikelele, kwaye sibulele ngokufaka idatha yebandla lakho "kwiNcwadi Yomhlaba Yeentlaba ZikaKristu" kunye ne "Church of Christ Directory Directory" yethu.
Sinokukunceda. I-Website yethu Builder iyinto elula kwaye ikhululekile ukuyisebenzisa kunye nayiphi na iiplani zethu zokubamba ngewebhu. Ukuba kuyimfuneko, sinokuyila iwebhusayithi yezobugcisa kwixabiso eliphantsi. Cofa apha okanye kwi-Website logo ukuze uthole iinkcukacha ezingaphezulu.